ကုမ္ပဏီ | မေ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး နှိပ်ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ရပ်ရွာ၊ သတင်း
ACA ၏ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ပွင့်လင်းမှုကာလသည်ပြည်နယ်နှင့်တစ်ပြည်နယ်ကွဲပြားသည်။ သင်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်သို့စာရင်းသွင်းရမည်သို့မဟုတ်လာမည့်ပွင့်လင်းသောကျောင်းအပ်နှံမှုမတိုင်မီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးရနိုင်ခြေရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သော? ဤနေရာတွင်ကျန်းမာရေးအာမခံရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေ။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုမရွေးချယ်မီမည်သည့်အရာကိုစဉ်းစားရမည်ကိုလေ့လာပါ။
SingleCare တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆေးဝါးများအတွက်ဆေးညွှန်းငွေစုဆောင်းခြင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးညွှန်းလျှော့စျေးကဒ်ဖြင့်သင်အများဆုံးသိမ်းနိုင်သည့်ဆေး ၁၀ ခုမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
RxSense သည်အလုပ်သစ် ၅၀၀ တွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏ကျေနပ်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုသည် Forbes ၏ဆုအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
Beta blockers နှင့်သိုင်းရွိုက်ဆေးသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသက်ကိုကယ်တင်သည်။ ဒီတော့အအေးမိခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးရာသီကုန်ဆုံးချိန်တွင်ဘာလို့ဆေးညွှန်းပိုများတာလဲ။ ကျွမ်းကျင်သူများကရှင်းပြသည်။
Cပြီလတွင် SingleCare တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဆေးများ
သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားသောဆေးဝါးများသည်Cပြီလတွင် SingleCare ဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးဆေးများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? လူအများအပြားတွင်သွေးတိုးရောဂါရှိသည်။
အမှတ်တံဆိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက် SingleCare ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
ယေဘုယျဆေးများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထက် ၈၅% ပိုသက်သာသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံယေဘူယျအားဖြင့်မရနိုင်ပါ။ အမှတ်တံဆိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများတွင်ငွေစုဆောင်းရန်အတွက် SingleCare အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာပါ။
ရင်သားကင်ဆာကုသမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသော်လည်းကုသမှုအမျိုးအစားနှင့်ကင်ဆာအဆင့်အရကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကင်ဆာကုန်ကျစရိတ်ကိုဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်သင်ကယ်ဖို့နည်းလမ်း5ပေး။
သင် Medicare သက်သာခွင့်များရထိုက်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဆိုင်ငွေစုကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာတရားမဝင်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆန့်ကျင်။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ
သငျသညျရိုးရာအာမခံမတတ်နိုင်လျှင်, အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်: ကပ်ဘေးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအာမခံ။ သင့်အတွက်မှန်ကန်လားဆိုတာဒီမှာဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ။
သူက SingleCare ကိုဘာကြောင့်စတင်ခဲ့တာလဲ
ယူအက်စ်ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေမှာရှုပ်ထွေးပြီးအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေပါသည်။ ၎င်းသည် SingleCare အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Rick Bates သည် HealthCare Consumerism Radio တွင်မိန့်ဆိုသောစကားဖြစ်သည်။
SingleCare နှင့်အတူ $ 10 ဆေးညွှန်းကိုရယူပါ၊ ပallိဇီဝဆေးများ၊ ဓာတ်မတည့်ဆေးများ၊ သွေးပေါင်ချိန်များနှင့်အခြားအရာများအပါအဝင်။ စျေးပေါသောဆေးညွှန်း ၅၀ နီးပါးကိုရှာပါ။
စျေးပေါ Rx ဆေးဝါးများကိုရှာဖွေနေပါသလား ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုတိုင်းတွင်အခမဲ့နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော SingleCare ကူပွန်များနှင့်သင်ရနိုင်သမျှအသက်သာဆုံးဆေးညွန်းစာများမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် SingleCare တွင်အများဆုံးဖြည့်ထားသောမူးယစ်ဆေးသင်တန်းများဖြစ်သည်
၂၀၂၀ တွင်အမေရိကန်များသည်အဘယ်ဆေးအမျိုးအစားများကိုသောက်ခဲ့သနည်း။ anti-hypertensives, anti-depressants နှင့်သိုင်းရွိုက်အေးဂျင့်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းများအနက်အချို့ဖြစ်သည်။
ထိန်းချုပ်သော ၀ တ္ထုများအက်ဥပဒေသည် ၁၉၇၀ တွင်တည်ရှိဆဲဖြစ်ပြီးသင်၏ဆေးညွှန်းကိုသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်ဆေးညွှန်းကိုမည်သို့ဖြည့်ရမည်နည်းကိုလေ့လာပါ။
လူအများစုသည်နှုတ်ယူခြင်းနှင့်ပရီမီယံအပေါ် အခြေခံ၍ ကျန်းမာရေးအာမခံကိုရွေးချယ်ကြသည်။ နိမ့်သောပရီမီယံနှင့်အပြန်အလှန်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုတ်ယူခြင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် methamphetamine (ဓာတ်ပြား) အဖြစ်မည်သို့ဖော်ပြသနည်း
adipex နှင့် phentermine အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ